Disposable PVC Anesthesia Face Mask - zvekurapa makambani
KumbaHutano & KurapaZvokurapa ZvinoshandiswaChigadzirwa
mwedzi 11 ago
Rynbay® anesthesia kumeso inogadzira mask muChina, ine anesthesia kumeso mask kune munhu mukuru, anesthesia kumeso mask kwevana, anesthesia kumeso mask kune mucheche, ine PVC anesthesia kumeso mask, silicone kumeso mask.
Isu takawana chitupa cheEC, kunyoreswa kweFDA, tanga tichitumira kunze kwenyika maesthesia kumeso masiki. Iyo anesthesia kumeso mask inogona zvakare kushandiswa kubatanidza neyemanongedzo resuscitator (ambu bhegi), kuendesa oxygen zvakare.
Rynbay Anesthesia Face Mask, ine mhando mbiri dzezvinhu zvaunogona kusarudza, PVC uye Silicone, ese ari maviri% ezvekurapa giredhi zvinhu, 100% Latex Yemahara; PVC kumeso masiki inoraswa, imwechete-murwere kushandiswa.
Izvo zvinhu zvemaski zvinosangana ne ISO13485: 2016 yekurapa chishandiso mhando manejimendi manejimendi inodikanwa, uye mativi ese haana rusununguko.
Silicone Reusable Anesthesia Face Mask - zvekurapa makambani
Emergency CPR Kununura Mask, CPR Pocket Mask, zvigadzirwa zvekurapa makambani
Chekutanga-Rubatsiro CPR Kununura Mask, CPR Pocket Mask, zvigadzirwa zvekurapa makambani
Chekutanga-Rubatsiro CPR Kununura Mask, CPR Pocket Mask, zvekurapa makambani
CPR Pocket Mask, Pocket Mask CPR, makambani ekurapa ekurapa
Chekutanga-Rubatsiro CPR Mask, CPR Pocket Mask, Pocket Mask CPR, Muromo-kuMuromo
Chekutanga-Rubatsiro CPR Mask, CPR Pocket Mask, Pocket Mask CPR, CPR Kudzidziswa
Silicone Ambu Chinyorwa Resuscitator, ambu bhegi ine peep vharafu